Kaydka Wanaagsan Diiwaangelinta Shahaadada Shahaadada Shahaadada Shahaadada Shahaadadaada - Shirkad Maalin leh
Home > Diiwaangalinta Shahaadada Shahaadada Shahaadada Shahaadada ee Tamarta
Maxaad u soo qaadataa Qorshaha EPC?
Si loo xisaabiyo qadarka lacagta ECO waxaad heli kartaa hantidaada waxaa lagama maarmaan ah in lagaa helo Shahaadada Shahaadada Cadaaladda (EPC) kaas oo la soo saaray ka dib Abriil 2012.
Haddii aad jeclaan lahayd Tamarta Maalgelinta si loogu diyaariyo an EPC sahaminta in lagu fuliyo hantidaada kharashka £ 60 oo ay ku jirto VAT fadlan dooro ikhtiyaarka sanduuqa midigta.
Si kastaba ha ahaatee, waxaan ku soo celineynaa kharashka marka la dhammeeyo ka dib marka shaqooyinka la dhameeyo.
Inta badan dhismayaasha si sharci ah ayaa looga baahan yahay inay lahaadaan EPC marka la dhiso, la iibiyo ama la kiraysto. Haddii aad rabto inaad hoos u dhigto qiiqaaga kaarboonkaaga, keydso shidaalka ama ka faa'iideysiga tamarta, a EPC waxay ku siinaysaa jawaab-celin shakhsi ahaaneed si ay kaaga caawiso hagaajinta
Markaad bixiso lacagtaada waxaa lagula soo xiriiri doonaa si aad u sameysatid wakhti iyo taariikh ku haboon EPC sahaminta in lagu fuliyo hantidaada.
Haddii aad qabto wax su'aalo ah oo ku saabsan ballansashadaada EPC ama GDAR naga soo wac0800 0 246 234.
Shuruudaha iyo xaaladaha: Fadlan ogsoonow in Energias Energy uu ku qoro EPC ama GDAR inuu yahay adeeg macsuum ah si uu u caawiyo macaamiisha, mana aqbalno wax mas'uuliyad ah ee saxda ah ee sahaminta ama ficilada qiimeynaha. Qandaraas kasta oo sahaminta ah ayaa u dhaxeeya macaamilka iyo qiimeeyaha tamarta ee haysta masuuliyadooda dadweynaha iyo caymiska khasaaraha shaqaalaha. Markaad sameyso baaritaanka waxaad ogolaatay shuruudaha iyo shuruudahaas.
Waxaan kuu sameyn karnaa wax isbedel ah!
Waxaan nahay Tamarta Kaydinta, kuleyliyaha kuleyliyaha iyo cusbooneysiinta tamarta. Fiiri sida ay u kala duwantahay Tamarta Tamarta waxay ka sameyn kartaa gurigaaga adiga oo dooranaya ikhtiyaar ka ah badhafyada hoose ...